Rebecca Hall – Cast – Channel Myanmar
A Rainy Day in New York (2019) unicode ဒီရုပျရှငျလေးကတော့ ဟာသ ဒရာမာ အမြိုးအစားပါပဲ။ ခှကျထိုးခှကျလနျရီရမယျ့ ဟာသမြိုးတှေ မဟုတျပါဘူး။ ရယျရခကျ ငိုရခကျ ကိုးရိုးကားယား ဟာသမြိုးတှပေါပဲ။ အခဈြဇာတျလမျးလေးကလညျး တဈမြိုးဆနျးပါတယျ။ သရုပျဆောငျတှကေတော့ သိတဲ့သူမြားမှာပါ။ တငျမိုသီ၊ အယျလျဖနျးနငျး၊ ဆယျလီနာဂိုးမကျဇျ၊ ဂြုလော တို့ ပါပါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးကတော့ ဂတျဈဘီဆိုတဲ့ နယူးယောကျကလာတဲ့ ကောလိပျကြောငျးသားလေးမှာ အကျရျှလိဆိုတဲ့ ခဈြသူကောငျမလေး တဈယောကျရှိတယျ။ တဈနမှေ့ာ အကျရျှလိဟာ ကြောငျးသတငျးစာအတှကျ နာမညျကြျော ဒါရိုကျတာ ရိုလနျပိုလကျနဲ့ တဈနာရီ အငျတာဗွူးခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ဒီတော့ ရိုလနျရှိတဲ့ နယူးယောကျကို စုံတှဲအတူခရီးထှကျရငျး အပနျးဖွကွေဖို့ စီစဉျလိုကျကွတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဟိုရောကျတော့ အကျရျှလိက ဒါရိုကျတာ၊ ဇာတျညှနျးဆရာ၊ နာမညျကြျောမငျးသားတှနေဲ့ ပေါကျကရအလှဲတှကွေုံပွီး၊ ဂတျဈဘီကလညျး သူ့ရညျးစားဟောငျးရဲ့ ညီမလေးနဲ့ နယူးယောကျရဲ့ မိုးရတှေထေဲမှာ ပေါကျကရတှေ ထပျကွုံရတယျပေါ့။ ဇာတျလမျးလေးကလှပါတယျ။ ဒိုငျယာလော့တှလေညျး ကောငျးတယျ။ ကွညျ့ရတာ ကသိကအောကျနဲ့ ခဈြစရာကောငျးပါတယျ။ ကွိုကျကွမှာပါ။ File Size : ( 868 MB , 299 MB ) Quality : Web-DL 720p Running Time : 1 hr 32 min Format ...
IMDB: 6.9/10 6,516 votes
Permission(2017) Permission(2017) (ဒီကားက ၁၈+ ဆန်ဆန်ပညာပေးကားမို့ အရွယ်ရောက်သူများသာကြည့်စေလိုပါသည်) ဝီလျံနဲ့အန်နာတို့စုံတွဲဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာတွဲလာခဲ့ကြတယ် ချစ်သူစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာအတူတကွနေလာခဲ့ကြပြီး အန်နာရဲ့အသက်၃၀ပြည့်မွေးနေ့မှာမထင်မှတ်တဲ့ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာဝီလျံရဲ့ သူငယ်ချင်းက အရက်မူးမူးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ သမရိုးကျ သစ္စာရှိရှိချစ်ကြိုက်ပြီး အချိန်တန်လက်ထပ်ကြတာဟာငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း အတွေ့အကြုံအသစ်အဆန်းရှာဖွေသင့်ကြောင့း် အခြားသူများနဲ့အတူတူအိပ်ဖို့အထိပါအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကမူးမူးနဲ့စနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် သူပေးတဲ့အကြံကို ဝီလျံနဲ့အန်နာတို့ကလက်ခံပြီး အချစ်အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာမှ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးဆက်လက်ခိုင်မြဲမလား ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းလိင်တူချစ်သူစုံတွဲရဲ့ဇာတ်ထုပ်ကလည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Sex & Nudity တွေ အတော်များများပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုနဲ့ အတူမကြည့်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ... File Size : (850 MB) and (300 MB) Quality : WEB-DL 720p, Format…mp4 Duration…01:36:00 Genre : Comedy , Drama , Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hnin Amy Khine Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 5.3/10 2,289 votes
Transcendence(2014) Transcendence(2014) 2014 ထွက် Drama | Mystery | Sci-Fi ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ... Dr. Will Caster နဲ့ Evelyn တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Max Waters နဲ့ အတူ Pinn ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်.... PINN ဆိုတာဟာ သူ့ဆီမှာ ရှိတဲ့ အချက်အလက်အကုန်လုံးကို လျှင်မြန်စွာ တွက်ချက်ပြီး အဖြေထုတ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ် ဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိတော့ မရသေးပါဘူး... နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ တခုမှာ Will Caster ဟာ လုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့တခြားသော team တွေအကုန်လုံးလဲ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် သူတို့ Research တွေလည်းလုံးဝဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်... နည်းပညာကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးလာတာကိုမလိုလားတဲ့လူတစ်စုကြောင့်ပေါ့ သူတို့ကတော့ "Revolutionary Independence From Technology" (R.I.F.T.)ပါ လုပ်ကြံမှုကြီးပြီးတဲနောက်မှာတော့ Will Caster ဟာ သူ့အတွက် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာရှိပါတော့တယ်.. ..အဲ့ဒါနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့..... ဒီကားက ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားကြီး Johnny Depp ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်...ဒါအပြင် Morgan Freemanလည်းပါနေသေးရဲ့.. ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၄တုန်းက ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနှစ်အတွင်းမှာ Google က announce ...
IMDB: 6.3/10 195,608 votes
The Town(2010) The Town(2010) IMDb.....7.6,,,,Rotten....93 FBI ၇ဲတွေ ဒေါသအရမ်းထွက်နေကြတယ်...FBIအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း ဆဲဆိုသံနဲ့အတူ " ဒီသောက်ဘဏ်ဓားပြတွေက သောက်ချဉ်တော့မဟုတ်ဘူးကွ" ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေတယ်... ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်ခံရပြီး အချိန်မီ အချက်ပေးသံကြောင့် ဘဏ်ကိုရဲတွေဝိုင်းခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်မှမမိလိုက်ဘူး.. ..မှုခင်းသဲလွန်စတွေရှာပြန်တော့လည်း cctv မှတ်တမ်းတွေဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင် လက်ဗွေရာတစ်စွန်းတစ်စတောင် မကျန်အောင် ဆပ်ပြာရည်တွေ ဘဏ်အတွင်းပက်ပြန်းသွားလို့ပါပဲ....တစ်ခုတော့ရှိတယ် ... ဘဏ်ဓားပြတွေက ဓားစာခံအဖြစ် ဘဏ်စာရေးမတစ်ယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်.. ..ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာက Ben Affleck ဖြစ်ပါတယ်... Gone Baby Gone ကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကားမှာ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကိုကြည့်ဖူးသူတိုင်း မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါ...မှုခင်း ဘဏ်ဓားပြ နဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ အချိုးကျတင်ဆက်ထားလေတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးလို့.... File Size : (900 MB) and (370 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:05:00 Genre : Crime, Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Thet Htet Oo Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 7.6/10 306,714 votes
Professor Marston and the Wonder Women (2017) ကျွန်တော်တို့အားလုံး Wonder Woman ဆိုတဲ့စူပါဟီးရိုးကို သိကြပါတယ်။ မပေါ့်တပေါ် အဝတ်အစားရယ်၊ ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရယ်၊ သူ့ရဲ့ စွမ်းအားတွေရယ်က အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ Batman, Superman တို့လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ တန်းတူရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ဒီ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့သူ စိတ်ပညာပရော်ဖက်ဆာ မာစတန်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ အချစ်ကို တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ လက်ခံထားကြပါတယ်။ တစ်ချို့က လိင်ကွဲပဲ ကြိုက်သလို၊ လိင်တူပဲ စိတ်ဝင်စားသူလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 20 ရာစုအစောပိုင်း၊ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းခဲ့ကြတဲ့ခေတ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ လှုပ်ရှားသူတွေ အတော်အကျပ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတာက ပရော်ဖက်ဆာ မာစတန်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူ အက်လီဇဘတ်ကိုယ်တိုင်က လိင်တူချစ်သူတစ်ဦးဖြစ်နေတာပါပဲ။ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကလဲ Bisexual တစ်ယောက်ပါ။ မာစတန်ဟာ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကို သူ့ဘဝမှာ အချစ်ရဆုံးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါ် အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Wonder Woman ရဲ့အဝတ်အစားကလဲ ...
The BFG (2016) 2016 IMDb 6.4 နဲ့ fantasy ကားကောငျးတဈကား အကွညျထှကျလာခဲ့ပါပွီ။ Disney ရဲ့ The BFG(Big Friendly Giant) ပါပဲ။ ဇာတျလမျးလေးကတော့ ရိုးစငျးပွီး လှပပါတယျ။ ဆိုဖီဆိုတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးလေးကို ကွငျနာတတျတဲ့ နှလုံးသားရှိတဲ့ မှငျစာဘီလူးကွီးက ဖမျးချေါသှားခဲ့မိတာက စတာပါပဲ။ လူသားစားတဲ့ဘီလူးတှနေထေိုငျတဲ့ ဘီလူးတိုငျးပွညျမှာ အသီးအရှကျပုတျလေးတှစေားပွီး အကောငျအသေးဆုံး ဘီလူးကွီး၊ လူသားစားတဲ့ဘီလူးတှကေို မတားနိုငျတဲ့အတှကျ လူသားကလေးလေးတှအေတှကျ အိပျမကျလှလှလေးတှေ လိုကျဖမျးပွီး လကျဆောငျပေးလို့ တတျနိုငျသလောကျ ပွနျပေးဆပျနသေူဘီလူးကွီးဟာ သူ့ရဲ့မိတျဆှဆေိုဖီလေးကို ကာကှယျရငျး ဆိုဖီရဲ့အားပေးမှုနဲ့ ဘီလူးတှအေားလုံးကို အပွီးအပိုငျမောငျးထုတျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့အခါ.... ဒီဇာတျကားကိုတော့ စာတနျးထိုးအမှနျမထှကျတဲ့အတှကျ နားထောငျပွီးပဲ အတကျနိုငျဆုံးဘာသာပွနျပေးထားပါတယျ။ အင်ျဂလိပျလသေံလညျးဖွဈ ဘီလူးတှကေလညျး လူစကားကို ကောငျးကောငျးအသံမထှကျတတျတော့ အကုနျလုံးတော့ မမှနျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အားလုံးနီးပါးတော့အနီးစပျဆုံးမှနျအောငျ ကွိုးစားပေးထားပါတယျ။ ဒီကားလေးကိုတော့ မိသားစုနဲ့ကွညျ့လို့ကောငျးပွီး ကလေး လူကွီးအကုနျနှဈသကျကွမယျထငျပါတယျ။ ------------------------------------------------------- 2016 IMDb ...
IMDB: 6.4/10 74,283 votes